Lacagta Miiska Soo Saara- Wakiilka Kieran Tierney Oo Maamulka Arsenal U Sheegay In Ay Bixiyaan Lacagta Celtic Xidigan Ku Doonayso. - Gool24.Net
Lacagta Miiska Soo Saara- Wakiilka Kieran Tierney Oo Maamulka Arsenal U Sheegay In Ay Bixiyaan Lacagta Celtic Xidigan Ku Doonayso.
July 6, 2019 Mahamoud Batalaale
Kooxda Arsenal ayaa bartilmaameed wayn ka dhiganaysa difaaca midig ee xulka Scotlland iyo kooxda Celtic ee Kieran Tierney laakiin Gunners ayaa dalabo ay ka gudbisay 22 sano jirkan waxaa soo diiday kooxda Celtic.
Wakiilka Kieran Tierney ayaa maamulka Arsenal u sheegay in ay miiska soo saaraan lacagta ay kooxda Celtic ku qiimaynayso xidigan si ay ula wareegi karaan.
Kooxda Napoli ayaa Arsenal ku cidhiidhyaysa saxiixa Kieran Tierney iyada oo maamulka Gunners ay hadda ka cabsi qabaan in Napoli ay bixiso lacagta ay Celtic ku qiimaynayso 22 sano jirkan reer Scotland.
Arsenal ayaa doonaysa in Kieran Tierney uu biixiyo booskii Nacho Monreal laakiin kooxda Celtic ayaa xidigan ku qiimaynaysa 25 milyan gini kaas oo ay ilaa hadda Gunners bixin wayday.
Celtic ayaa haddaba la soo wareegtay badalka Kieran Tierney kadib markii ay la soo saxiixdeen Boli Bolingoli-Mbombo balse waxay Celtic sugaysaa in ay helaan dalab ku haboon xidigan.
Wakiilka Kieran Tierney ee Allan Preston yidhi: “Wax walba waxay u khuseeyaan Celtic. Haddii ay helaan qiimaha ay rumaysan yihiin in uu sax ku yahay Kieran Tierney, suurtogal ahaan wuu bixi karaa, ma jiro hal mid oo wali gaadhay qiimahaasi”.
Wakiilka Kieran Tierney ee Allan Preston oo Arsenal iyo Napoli ka hadlaya ayaa yidhi: “Waxaan filayaa in haddii ay hadda tahay ay u taalo kooxaha ku lug leh. Arsenal, Napoli ama cidkasta oo miiska lacagta soo saarta si ay Celtic ugu dhigaan kuwo ka fikiraya kan”.
Hadalkan ayaa kooxaha Napoli iyo Arsenal siinaya in ay dalab ay Celtic aqbali karto u gudbiyaan markaas oo ay heli karaan saxiixa Kieran Tierney oo ka mid ah difaacyada midig ee heerka sare ah.